November 2021 - Celegroup
ခွေးများအူလျှင် သတိထားရမည့် အရာနှင့် ခွေးအူလျှင် လုပ်ဆောင်ရမည့် အရာများ
November 30, 2021 Celegroup1975 0
ယခုတေလာ ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕အႏွံ့တြင္ ညသန္းေခါင္ခ်ိန္၌ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ေခြးအူျခင္းမ်ား ေနစဥ္ၾကားရ လ်က္ရွိသည္။ ပုံမွန္ေဟာင္ေသာ အသံမဟုတ္ပဲ စူးရွဆို႔နစ္ေသာအသံမ်ား၊ဆိုးဝါးေသာအသံမ်ားတို႔ျဖင့္ နားမၾကားသာေအာင္ အူလ်က္ရွိသည္။ ထိုအရာသည္ မေကာင္းေသာ နိမိတ္ကိုျပေနျခင္းျဖစ္ေလသည္။ၿမိဳ႕ရြာတို႔၌ ေဘးဆိုး အႏၲရာယ္ဆိုး ကပ္ဆိုး မေကာင္းမႈ႔တို႔ ႀကီးစြာက်ေရာက္နိူင္ၿပီး အေသအေပ်ာက္မ်ားနိူင္ျခင္း၊ၿမိဳ႕ရြာတို႔၌ကုသိုလ္တရားနည္းပါးလာ၍ ဖုတ္၊ၿပိတၱာ၊ဘီလူး၊တေစၧ၊နာနာဘာဝတို႔က ဝင္ေရာက္လာၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔ ဝင္ေရာက္လာၾကေသာအခါမေကာင္းေသာအရာမ်ားကို ျမင္နိူင္စြမ္း အရွိဆုံးမွာ ေခြးမ်ားပင္ျဖစ္ေလသည္။ေနာက္တခုကား ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ သမၼာေဒဝနတ္ေကာင္း နတ္ျမတ္မ်ားမွလည္း ေဘးဆိုးတို႔ကိုမၾကဳံရေအာင္ ေခြးတို႔မွတဆင့္ သတိေပးေစေသာ […]
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၀ခန့်က ‘ဦးသန့်ရေးခဲ့သောစာ’သွေးထွက်အောင်မှန်တယ်ဆိုတာဒါမျိုး
ငါ့အိမ္က မင္းအိမ္ထက္ ပိုႀကီးသကြ’‘ငါ့အေဖက မင္းအေဖကို အသာေလးနဲ႔ ေနာက္ေကာက္ခ်နိုင္တယ္ ေမာင္’ စသျဖင့္။ ဤသို႔ေသာ ကေလးအႂကြားမ်ိဳးကို…. မိဘျဖစ္သူမ်ားက ဟန႔္သေယာင္၊ တားသေယာင္ ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း စိတ္ထဲကေတာ့… က်ိတ္သေဘာက်ေနၾကသည္က မ်ားသည္။ ဒီလိုႏွင့္ ….’ငယ္က်င့္’ ေတြမွာ ‘လူႀကီးဘဝ’ အထိ ပါလာေတာ့သည္။ ဦးေရႊက သူ႔ဇနီးအတြက္ ေရႊဘီးတစ္ေခ်ာင္း လုပ္ေပးေသာအခါ …. အိမ္နီးခ်င္း ဦးေငြက အားက်မခံ သူ႔မိန္းမကို စိန္ဘီး လုပ္ေပးသည္မွာ အဆိုပါ […]
နတ်တွေက သင့်ကို စောင့်ရှောက်နေရင် သိနိုင်မယ့် နိမိတ် ၅ မျိုး…
နတ်တွေက သင့်ကို စောင့်ရှောက်နေရင် သိနိုင်မယ့် နိမိတ် ၅ မျိုး တစ်ချို့လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ မွေးရာပါကံလို့ပဲပြောရမလား၊ ထူးခြားချက်လို့ပဲပြောရမလား (အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်) နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ စောင့်ရှောက်ခြင်းကို အမြဲတမ်းခံရပါတယ်။ သင့်ကိုနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ့်အချက် (၅) ချက်ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီအရာလေးတွေကို သင်အမြဲလိုလို ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ မမြင်ရတဲ့ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ စောင့်ရှောက်ခြင်းကို ခံရသူပါ။ (၁) ငှက်မွှေးလေးကျလာတယ် တကယ်လို့သင့်အနားလေးမှာ ငှက်မွှေးလေးဝဲနေတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်အပေါ်လေးကိုကျလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာ […]
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ဆော့ကစားတတ်တဲ့ ရင်ခွင်ဝေးသားများ၏ ငိုခြိုက်သံ….
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ဆော့ကစားတတ်တဲ့ ရင်ခွင်ဝေးသားများ၏ ငိုခြိုက်သံ ကိုရင်ငယ်တို့၏ ရင်ထဲ ဝင်၍ဖက်ပါ ရင်ခွင်ဝေးသား အဖြစ်ကို သား ရခဲ့တာဟာ ရောင်ဝါသင်္ကန်းကို ဆင်မြန်းတဲ့ နေ့ကတည်းကပါ အမေ အမေတို့နဲ့ တစ်မြေဆီခြားတဲ့နေ့ဟာလည်း သားဘဝ အတွက် စာသင်တိုက်ကို စတင်ထွက်ခွာခဲ့တဲ့ နေ့ကပါ အမေ သား ဘဝဟာ အဖေ အမေ ရှိပါလျှက်နဲ့ အဖေ အမေလို့ တွင်တွင်ကြီး အော်ခေါ်ကာ မျက်နှာကိုကြည့်တိုင်း မမြင်ရတော့ပါဘူး သားအတွက် […]
ကြင်ဖော်ရွေးမယ် ဆိုရင်တစ်ချိန်တုန်း က ကချင်မလေးတွေ ဆို ခါကာဘိုရာဇီတောင် က ရေခဲမှုံလေးတွေ လိုဆွတ်ဆွတ်ဖြူပြီး နူး ညံ့မ ယ် လို့ ထင်ခဲ့ ဖူးတာ
ဖ တ် ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ ဆက်မရီနိုင်တော့ဘူး ကြင်ဖော်ရွေးမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်တုန်းက ကချင်မလေးတွေဆို ခါကာဘိုရာဇီတောင်က ရေခဲမှုံလေးတွေလိုဆွတ်ဆွတ်ဖြူပြီး နူးညံ့မယ်လို့ ထင်ခဲ့ဖူးတာ..ဒါပေမယ့် မြင်တွေ့ခဲ့သမျှကတော့ ပွယောင်းယောင်းအသားနဲ့ ဘာအရက်လာလာ ကိုယ်နဲ့ အပြိုင်သောက်နိုင်တဲ့စကေးပဲ မယုံရင် လုလုအောင်ကို မိတ်ကပ်မလိမ်းခိုင်းဘဲ သွားကြည့်.. က ယားမလေးတွေကျပြန်တော့ အေးလွန်းတယ်.. တစ်ချို့ အဲဒီကလာတဲ့သူတွေရဲ့ အိမ်ကိုသွားလည်ဖူးတော့.. နာရီဝက်သာကြာသွားတယ်.. သူ့ဆီက စကားတစ်ခွန်း မထွက်ဘူး.. သစ္စာတော့ ရှိတယ်.. အနေအေးပြီး စကားနည်းလွန်းလို့ ဆီလီကွန်အရုပ်ဝယ်တာမှ […]
အမျိုးသမီးတွေ အမှန်အတိုင်း ဖွင့်ပြောလေ့မရှိတဲ့အချက်(၄)ချက်
ရိုးသားမှုဆိုတာ ချစ်ခြင်းတစ်ခုမှာ အရေးအကြီးဆုံး မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ သို့ပေမယ့်လည်း တစ်ချို့သော အတိတ်ဖြစ်ရပ် တွေဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြဖို့ အခြေအနေမပေးတာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ အတိတ်ဟာ အတိတ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ အတိတ်ကိုပြန်တူးဆွရင် လက်ရှိအခြေအနေတွေ ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အတိတ်ဟာ လက်ရှိအချိန်ကို လာရောက်ထိခိုက်မှု မရှိစေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ အနောက်မှာပဲ ချန်ထားခဲ့တာ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ကျွနု်ပ်တို့လည်း အလားတူ ရိုးသားစွာနဲ့ လိမ်ကောင်း လိမ်မိဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးကတော့ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ အမှန်အတိုင်း ဖွင့်ပြောလို့မရှိတဲ့ အရာ […]
ငါးမျှားနေတဲ့ ဖိုးထောင် ဉာဏ်ကောင်းချက် လက်ဖျားတောင်ခါရတယ် ဉာဏ်တော့_ကောင်းရတာပေါ့ တစ်ခါက မိန်းပျိုလေးတစ်စု တောတောင်တွေထဲ လေ့လာရေးခရီး ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်နေရာမှာ သာယာလှပတဲ့စမ်းချောင်းလေးတစ်ခု တွေ့တာနဲ့ အားရရွှင်မြူးစွာ ရေကူးကြဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းမပျိုတစ်ဦးက.. ” ငါတို့မှာ အဝတ်အစားအပိုမှမပါတာ..ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ” ပြောတော့.. နောက်တစ်ဦးက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်ပြီး.. ” ကိစ္စမရှိပါဘူး..လူသူလေးပါးကင်းပါတယ်…အကုန်ချွတ် ပြီး ဆင်းကူးကြတာပေါ့ ” ဆိုပြီး အားလုံး အဝတ်တွေချွတ် ကာ […]
ရှက်စရာပေမဲ့ ပြောရဦးမယ် ယောင်္ကျားလုပ်တဲ့သူတွေ ကိုယ့်မိန်းမကိုမှုတ်ပေးဖူးလား ကျွန်တော်ကတော့လုပ်ပေးဖူးပါတယ် စလုပ်တုန်းကတော့ရှက်တာပေါ့ ဘဝမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ပထမဆုံးမှုတ်ပေးဖူးတာလေ..မသင့်တော်ဘူးထင်ရပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ခရီးအတွက် တကယ့်ကိုလိုအပ်ပါတယ် အထူးသဖြင့် မိန်းမသားဘက်က ကိုယ့်ယောကျ်ားကိုအားနာလို့သာ မလုပ်ခိုင်းရင်နေမယ် သူတို့အတွက်ကတော့ တကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ် အချိန်တိုင်းတော့မဆိုလိုပါဘူး ရေမိုးချိုးသန့်စင်ပြီးမှ မှုတ်ပေးရတာပါ မဟုတ်ရင်အဆင်မပြေဘူးလေ.. နှစ်ယောက်သားရဲ့အချစ်ခရီးကို ပိုခိုင်မြဲစေတာမှန်ပေမဲ့တစ်ခုရှိတာက ပါတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်ပါ မှုတ်တဲ့အချိန်ကအသံထွက်နိုင်တာမို့ အထူးဂရုစိုက်ရပါတယ် ကိုယ့်မိန်းမကိုမှုတ်ပေးနေပေမဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောက်အယှက် ပေးမိသလိုဖြစ်သွားရင်မကောင်းဘူးလေ ညဘက်လူခြေတိတ်ချိန်ဆိုသိသာတယ်ဗျ စောစောလေးလုပ်ကြပါ ကြာကြာမှုတ်နိုင်လေ သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်ပိုကောင်းလေပါ..ဒါမဆံပင်တွေခြောက်ပြီး […]
ဒါကိုဖတ်ပြီးမှ အပြာကားကြည့်ပါ ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင် လူငယ်နဲ့အပြာကားဆိုတာ ခွဲခြားလို့မရတော့ပါဘူး။ အပြာကားမကြည့်ဖူးတဲ့လူဆိုတာလည်း နှင်းဆီနက်ထက်တောင် ရှားပါသေးတယ်။ အပြာ ကားတွေကို သူငယ်ချင်းတွေဆီကနေ Zapya နဲ့ Share ကြတဲ့သူတွေရှိသလို Online ကနေလည်း တိုက်ရိုက်ကြည့်ကြတဲ့သူတွေလည်း မနည်းတော့ပါဘူး။ အပြာကားအသစ် ထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ Online မှာ အုန်းအုန်းကြွက်ကြွက်ဖြစ်နေလိုက်တာ မြင်မကောင်းပါဘူး။ ဖုန်းထဲမှာ အပြာကားမပါရင်ကို ခေတ်မမီသလိုဖြစ် နေပါပြီ။ အပြာကားကို ကြည့်နေကျလူတစ်ယောက်ဟာ သူငယ်ချင်ကို တွေ့တာနဲ့ ဇာတ်ကားအသစ်ပါသေးလားလို့မေးတာလည်း ထုံးစံလိုဖြစ်နေပါပြီ။ […]
အိပ္တဲ့အခါမွာ ဆံပင္စည္းၿပီး မအိပ္သင့္တဲ့အေၾကာင္းအရင္းမ်ား အိပ္တဲ့အခါမွာ ဆံပင္ခ်ၿပီးအိပ္ရင္ ဆံပင္ေတြရႈပ္တယ္ဆိုၿပီး စည္းအိပ္ၾကတာမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဒီလိုဆံပင္စည္းအိပ္တာက တစ္ရက္ဆိုတစ္ရက္ ဆံပင္ပ်က္စီးတာ အရမ္းသိသာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိပ္တဲ့အခါမွာ ဆံပင္စည္းၿပီးမအိပ္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္ေတြကို ေျပာျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ဆံပင္ကြၽတ္ေစတယ္ ဆံပင္စည္းၿပီးအိပ္ရင္ ဆံပင္ေတြကို အျမစ္ကကေနဆြဲထားသလိုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆံပင္ေတြကြၽတ္လာေစပါတယ္။ ဆံပင္စည္းအိပ္ၿပီးအိပ္ယာႏိုးလို႔ ေခါင္းၿဖီးလိုက္ရင္ ဆံပင္ေတြအမ်ားႀကီး ကြၽတ္ပါလာတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ ဆံသားပ်က္စီးေစတယ္ ဆံပင္စည္းၿပီးအိပ္ရင္ ဆံပင္ကြၽတ္တဲ့အတြက္ ဆံသားေတြလည္း တေျဖးေျဖးနဲ႔ပ်က္စီးလာမယ္။ အဓိကကေတာ့ ဆံပင္ေအာက္ဖ်ားေတြဖြာၿပီး၊ က်ိဳးေၾကသလိုေတြ ျဖစ္လာမယ္။ […]
ကြားရသူတိုင်း မျက်ရည်ကျစေတဲ့ ချစ်သုဝေ ရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ ကဗျာလေး…
ကြားရသူတိုင်း မျက်ရည်ကျစေတဲ့ ချစ်သုဝေ ရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ ကဗျာလေး အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင်ပါ ရှိပါသည် … ချစ်သုဝေ ကတော့ ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက အဆိုတော်လုပ်ရင်း မြန်မာဇာတ်လမ်း တွေမှာလည်း ကျရာ နေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ခံခဲ့ရသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သုဝေကတော့ ဆရာဝန်တစ်ယောက် ဖြစ်ပေမဲ့ အနုပညာ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ရင်း အဆိုတော် လင်းလင်းနဲ့ အိမ်ထောင် ကျပြီးလို့ ခေတ်ခေတ်နဲ့သစ်သစ် လို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူ […]
နိုင်ငံခြားသားတွေကတောင် ခေါင်းတခါခါ လည်တခါခါဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ အဖြစ်အပျက်
မြန်မာတို့နှင့်အလွဲများ မြန်မာသည် မဟုတ်တာကို အလွန်ကြွားဝါချင်လှ၏ ။ ရေခဲသေတ္တာ ကို ဧည့်ခန်းတွင်ထားခဲ့ကြသည် ၊ အ၀တ်လျှော်စက်ကို အိမ်ရှေ့တွင်လူမြင်အောင်ပြ၏ (ထားစရာနေရာမရှိသဖြင့်ထားရခြင်းကို မဆိုလို ) ၊ မှန်ဗီရို ၇ှိုးကေ့စ်ကိုဧည့်ခန်းတွင်ထားကာ ထို မှန်ဗီရို ထဲတွင် လက်ဘက်ရည် ပန်းကန် ( Tea Set ) များကို အလှထည့်ထားကြသည်မှာ လူ ၅၀ ခန့်ကို လက်ဖက်ရည်တိုက်၍ ရသည် ။ သို့သော် […]